2 Ahene 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Ahene 1:1-18
1 Ahab wu akyi+ no, Moab+ tew Israel so atua.+ 2 Na Ahasia fii ne dan a ɛwɔ Samaria no atifi+ tokuru mu bɛhwee fam,+ na ɛbɔɔ no yare. Enti ɔsomaa abɔfo, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ nkobisa+ Ekron+ nyame Baal-Sebub+ mma me sɛ mefi ɔyare yi mu afi anaa.”+ 3 Na Yehowa bɔfo+ ka kyerɛɛ Tisbini+ Elia sɛ: “Sɔre kohyia Samaria hene abɔfo no na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘So Onyankopɔn bi+ nni Israel nti na morekɔ Ekron nyame Baal-Sebub hɔ abisa yi? 4 Enti nea Yehowa aka ni: “Mpa a woaforo no, worensi mfi so, efisɛ owu na wubewu.”’”+ Ɛnna Elia fii hɔ kɔe. 5 Bere a wɔn a ɔsomaa wɔn no san baa ne nkyɛn no, ɛhɔ ara na obisaa wɔn sɛ: “Dɛn nti na moasan aba yi?” 6 Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔbarima bi fi behyiaa yɛn, na ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ, ‘Monsan nkɔ ɔhene a ɔsomaa mo no nkyɛn, na monkɔka nkyerɛ no sɛ: “Nea Yehowa aka ni,+ ‘So Onyankopɔn bi nni Israel nti na morekɔ Ekron nyame Baal-Sebub hɔ abisa yi? Eyi nti mpa a woaforo no, worensi mfi so, efisɛ owu na wubewu.’”’”+ 7 Na obisaa wɔn sɛ: “Ɔbarima a ofi behyiaa mo a ɔkaa nsɛm yi kyerɛɛ mo no, na ɔte dɛn?” 8 Ɛnna wobuaa no sɛ: “Ɔyɛ ɔbarima bi a ɔhyɛ atade a wɔde aboa nhwi ayɛ,+ na ɔde aboa nhoma abɔso abɔ n’asen.”+ Ɛhɔ ara na ɔkae sɛ: “Ɛyɛ Tisbini Elia.” 9 Na ɔsomaa aduonum so panyin ne n’aduonum kɔɔ ne nkyɛn.+ Bere a ɔkɔe no, ɔkɔtoo no sɛ ɔte bepɔw no atifi. Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nokware Nyankopɔn nipa,+ ɔhene se, ‘Sian bra.’” 10 Ɛnna Elia ka kyerɛɛ aduonum so panyin no sɛ: “Sɛ meyɛ Onyankopɔn nipa a, ɛnde ogya+ mfi soro mmɛhyew wo ne w’aduonum.” Na ogya fii soro bae, na ɛbɛhyew ɔne n’aduonum no.+ 11 Na ɔsomaa aduonum so panyin foforo ne n’aduonum kɔɔ ne nkyɛn.+ Ɔno nso kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nokware Nyankopɔn nipa, ɔhene se, ‘Sian bra ntɛm.’”+ 12 Ɛnna Elia ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ meyɛ nokware Nyankopɔn nipa a, ɛnde ogya mfi soro mmɛhyew wo ne w’aduonum.” Na Onyankopɔn gya fii soro bae, na ɛbɛhyew ɔne n’aduonum no. 13 Ɛnna ɔsan somaa aduonum so panyin a ɔto so abiɛsa ne n’aduonum.+ Bere a aduonum so panyin a ɔto so abiɛsa no kɔe no, okobuu nkotodwe+ Elia anim paa no kyɛw+ kae sɛ: “Nokware Nyankopɔn nipa, mesrɛ wo, ma me kra+ ne wo nkoa aduonum yi akra nsom bo+ w’ani so. 14 Hwɛ, ogya fi soro bɛhyew+ aduonum so mpanyimfo baanu a wodii kan bae no ne wɔn aduonum aduonum no. Na me de, ma me kra nsom bo w’ani so.” 15 Ɛnna Yehowa bɔfo ka kyerɛɛ Elia sɛ: “Sian ne no nkɔ. Nsuro no.”+ Enti ɔsɔree, na osian ne no kɔɔ ɔhene nkyɛn. 16 Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nea Yehowa aka ni, ‘So Onyankopɔn bi nni Israel a wubetumi abisa no hɔ ade nti na woasoma abɔfo+ sɛ wɔnkɔ Ekron+ nyame Baal-Sebub hɔ abisa yi? Eyi nti mpa a woaforo no, worensi mfi so, efisɛ owu na wubewu.’” 17 Na nkakrankakra, owui+ sɛnea Yehowa asɛm+ a Elia kae no te. Na Yehoram+ bedii n’ade wɔ Yehosafat ba, Yuda hene Yehoram+ afe a ɛto so abien mu, efisɛ na onni ɔbabarima. 18 Nneɛma a aka a Ahasia+ yɛe no, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ Israel ahene bere so nsɛm nhoma+ no mu.
2 Ahene 1